Indlela uAgasus Ehamba Ngayo Kusuka Ekugqibeleni Kuya Kubukhulu
UAgasto, indoda enomdla kunye nengxabano, kungenzeka ukuba yayibaluleke kakhulu kwimbali yamaRoma. Ngokuphila kwakhe okude (63 BC-AD 14) kunye nezenzo, iRiphabhuliki ehlulekayo yaguqulwa ibe yiNqununu eyayinyamezela iinkulungwane.
Ngaphambi kokuba abulawe, uJulius Caesar wabiza umzukulu wakhe u-Octavius ​​njengendlalifa, kodwa u-Octavius ​​wayengayazi de kwafa uKesare. Wabe ethatha igama C.
UJulius Caesar Octavianus okanye i-Octavian (okanye uKhesare kuphela), awayeyigcina de waba ngu-Imperator Caesar Caesar Agasti 16, 17 BC
Ukuba yindodana eyamkelweyo yindoda enkulu yayithetha inxalenye yezopolitiko - ekuqaleni. UBrutus noCassius, amadoda aphethwe iqela elabulala uJulius Caesar basenamandla, njengokuba wayengumhlobo kaKesare ka-Antony. Ukuxhaswa kukaCicero ye-Octavian kukhokelela ekugatheni u-Antony kwaye ekugqibeleni, ukwamukelwa kwe-Octavian eRoma.
Agasti noThathu Triumvirate
Ngo-43 BC, u-Antony, umsizi wakhe weLepidus, kunye ne-Octavian baqulunqa i-triumvirate (triumviri rei publicae constituendae) iminyaka emihlanu eya kuphela ngo-38 BC Ngaphandle kokubonisana ne-senate, la madoda amathathu ahlula amaphondo phakathi kwawo, EFilipi) walwa nabahlanguli ababezibulala.
UAgasto Uwubamba iMfazwe ye-Actium
Ikota yesibini ye-triumvirate iphelile ekupheleni kwe-33 BC
Ngeli xesha u-Antony wayetshatile udadewabo wase-Octavian waza wamgxeka uCleopatra. Ukumangalela u-Antony wokumisela amandla eYiputa ukuba asongele iRoma, uAgasto wahola imikhosi yamaRoma ngokumelene no-Antony kwi- Battle of Actium . U-Antony, watshatyalaliswa ngokukhawuleza, ngokukhawuleza wazibulala.
Amandla ka Agasti
Ngabo bonke abachasileyo abachaseleyo bafa, iimfazwe zomkhosi zaphela, amajoni ahlala kunye nobutyebi obuvela eYiputa, i-Octavian - kunye nenkxaso yonk
Iintaba ezi-7 zaseRoma
5 Iimbubu eziqhakamshekileyo eziqhelekileyo ezivela eRoma lasendulo
Yayinjani Imilinganiselo Yomzimba WaseRoma?
Amacandelo e-Watercolor: Ukuhlambulula imibala emibini kunye ne-Variegated Washes
Yintoni igama likaBeyonce langempela?
Oko Kufuneka Ukwazi Ngohlala Kwezonyango kunye noQeqesho
1996 I-PGA Championship: It Brooks in Playoff
Iimbasa eziPhambili kunye neeNhlonipho zezoQoqosho
UGeorge Orwell - Uluhlu lwemisebenzi
Uluphi u-Putter-Balanced Equator?